हाच्छिऊँले पार्यो पूर्व गोर्खालाई फन्दामा
लण्डन । खोक्नु, हाइ काड्नु, डकार्नु आममानिसको दिनचर्यामा अति सामान्य कुरा हुन् । दिनमा अनेकौँ पटक दोहोरिने यस्ता कार्य गणना त के सम्झनासम्म गर्न लायक ठानिँदैन । तर कहिलेकाहीँ यस्ता सामान्य बेहोराले पनि जघन्य...
करिव दुई वर्षदेखि तीव्र विवादमा फंसेका कांग्रेसको दुई प्रवासी संगठन नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायत दुवै अवैधानिक देखिएका छन् । माउ पार्टी नेपाली कांग्रेस दुवै संगठनका बारेमा मौन बस्दै उनीहरुलाई आधिकारिता नदिएपछि अवैधानिक भएका हुन् ।निर्वाचित...
भूपू गोर्खाहरुको कष्टकर जीवन
किन मिल्दैनन् गोर्खा संगठन?
लन्डन । बेलायतको आवासीय अधिकार पाएपनि बेलायती समकक्षी सो सरह समान पेन्सन, १८ वर्ष नाघेका आफ्ना सन्तानलाई समेत आवासीय अधिकार दिइनु पर्ने लगायतका माग राखेर भूपू गोर्खाहरुको आन्दोलन जारी छ । सदन देखि सडकसम्म गोर्खा संगठनहरुले...
क्षेत्रीलाई प्रशंसै प्रशंसा
दौरा सुरुवाल, नेपाली ढाका टोपी, कालो कोटमा सजिसजावट । हेर्दा सामान्य तर हसिलो मुहारका एक जना मानिस सबैका आकषर्ण थिए । उनकै प्रसंसा हुदै थियो सातौ गणतन्त्र दिवसमा । ‘काम गर्न इच्छा शक्ति चाहिन्छ,...
लन्डन । बेलायतमा पहिलो पटक एक जना नेपाली उपमेयर निर्वाचित भएका छन् । फिजिओथेरापिष्ट डा. जगन्ननाथ शर्मा नर्थ योर्कसायरको कोलबर्न टाउन काउन्सिलका उप मेयर निर्वाचित भएका हुन् । शर्मा यसअघि उक्त काउन्सिलमा करिव चार...
लन्डन । डिजिटल प्रविधिको विकासले नेपालमा लोकबाजा लोपोन्मुख हुंदै गर्दा ति पुराना बाजाको ध्वनी बेलायतमा गुञ्जने भएको छ । दशक अघि स्थापित व्याण्ड ‘कुटुम्ब’ ले बेलायतका विभिन्न शहरमा नेपाली लोक धुन प्रस्तुत गर्ने भएको...
« अघिल्ला 1 …910 11